UNWTO चुनावले मात्र एलेन सेन्ट एन्जलाई करोडपति बनायो
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सरकारी समाचार » UNWTO चुनावले मात्र एलेन सेन्ट एन्जलाई करोडपति बनायो
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • समाचार • मान्छे • जिम्मेवार • सेशेल्स ब्रेकिंग न्यूज • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
एलेन सेन्ट एन्ज UNWTO चुनाव मा प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो मन्त्री द्वारा अनुमोदन प्राप्त भयो
यो सबै मार्च २३, २०१ on मा बर्लिन मा एक ITB समारोह मा एक खुसी नोट मा शुरू भयो, जब सेशेल्स पर्यटन मन्त्री Loustau-Lalanne पूर्व मंत्री St.Ange को UNWTO का लागि महासचिव को लागी द्वीप को उम्मेदवार को रूप मा बाहिर जाने तालेब Rifai को उपस्थिति मा समर्थन UNWTO एसजी
विश्व को एक ठूलो हिस्सा 2017 मा UNWTO को सचिव को चुनाव को लागी यो तरीका हुनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा बुझ्न एकीकृत छ। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र धेरै धेरै UNWTO महासचिव Zurab Pololikashvili को वर्तमान स्थिति सुरक्षित प्रक्रिया को दौरान रिपोर्ट गरीएको थियो
उम्मेदवारहरु मध्ये एक त्यो समय मा पद को लागी प्रतिस्पर्धा श्री एलेन सेन्ट एन्ज थियो। उनले आफूलाई के भयो भनेर दिइएको रूपमा लिएनन्। ४ बर्ष पछि उनको जन्मस्थल सेशेल्सको उच्चतम अपील अदालतले उनलाई M मिलियन सेशेल्स रुपियाँ वा बिहीबार ५२4००० डलर क्षतिपूर्ति दियो।
विश्वका धेरैले अब सोध्छन् कि UNWTO यस कोविड स through्कट को माध्यम बाट एक फरक नेता को साथ कसरी प्रगति भयो?
यो UNWTO पक्का पक्का अधिक पारदर्शी, मिडिया मैत्री, र निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बद्ध एजेन्सी को सबै सदस्य सरकारहरु को लागी खुला हुनेछ।
सेन्ट एन्जेले अक्टोबर २०१ in मा सेशेल्स मा एक मुद्दा दायर गरे उनी UNWTO चुनावमा खडा हुन आफ्नै सरकार द्वारा अयोग्य ठहरिए पछि। यो म्याड्रिड मा UNWTO कार्यकारी परिषद को बैठक को दौरान चुनाव भन्दा २ दिन पहिले खुशी भयो। यो अप्रत्याशित थियो र उम्मेदवार सेन्ट एन्ज, उनका समर्थकहरु, र पूर्व महासचिव रिफाई र अन्य धेरै को लागी ठूलो लाजमर्दो बिन्दु थियो।
उनले चुनाव भन्दा पहिले एक भावनात्मक भाषण दिए उनलाई अब प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति थिएन।
UNWTO उम्मेद्वार को रूप मा अयोग्य ठहरिए पछि 2017 मा UNWTO कार्यकारी परिषद मा Alain St Ange द्वारा भावनात्मक भाषण
Alain प्रेस माया गर्नुहुन्छ, उहाँ मानिसहरुलाई माया गर्नुहुन्छ र निजी यात्रा र पर्यटन उद्योग को एक ठूलो समर्थक हुनुहुन्छ। जब उनी सेशेल्स को लागी पर्यटन मन्त्री थिए उनले शुरू गरे भिक्टोरिया कार्निवल, एक घटना हो कि संसारको सबै भागहरु बाट कार्निवल र आगन्तुकहरु लाई यो सानो टापु राज्य मा ल्याईयो। कार्निवल, कि त्रिनिदाद, नॉटिंघम, कोलोन सेशेल्स मा रियो डी जेनेरियो सम्म परेड अझै पनी यसको बारेमा कुरा गर्दै छन्।
दुर्भाग्यवश, सेन्ट एन्ज UNWTO सदस्य देशहरु द्वारा मतदान गर्न को लागी एक मौका कहिल्यै थिएन।
अफ्रिका छडी को छोटो अन्त प्राप्त गरीरहेको थियो चुनाव को समयमा एक प्रमुख चिन्ता थियो, र यो धेरै को अनुसार एक दुखद वास्तविकता मा परिणत भयो।
फिर्ता 2017 मा, दुई अफ्रिकी नेताहरु अफ्रिका लाई विश्व पर्यटन चरण मा ल्याउन को लागी कोशिश गर्दै थिए: डा वाल्टर Mzembi, जिम्बाब्वे बाट उस समय सबैभन्दा लामो समय सम्म अफ्रिकी पर्यटन मन्त्री, र सेचेल्स बाट एलेन St.Ange।
अफ्रिकी संघ अफ्रिका को लागी उम्मेदवार को रूप मा डा Mzembi को समर्थन, जो सेशेल्स द्वारा समय मा पनि पुष्टि गरीएको थियो। अफ्रिकाका दुई उम्मेदवारहरु संग, अफ्रीका को लागी महासचिव को रूप मा आफ्नो एक असाइन गर्ने मौका एक वास्तविक चुनौती बन्यो।
जिम्बाब्वेले राष्ट्रपति मुगाबेको नेतृत्वमा अफ्रिकी युनियनलाई सेशेल्सलाई एलेन सेन्ट एन्जलाई चलाउन नदिन बाध्य तुल्यायो। सेशेल्स मा दबाब जबरदस्त थियो र अफ्रिकी प्रतिबन्ध को धम्की।
सेशेल्स सरकारले चुनाव भन्दा केहि मिनेट अगाडी दिए र जबरजस्ती सेन्ट एन्ज लाई चुनाव बाट फिर्ता लिए।
यो उम्मेदवार सेन्ट एन्ज, तर UNWTO, र चुनाव प्रक्रिया को अखण्डता को लागी एक ठूलो शर्मिला थियो। दुर्भाग्यवश, यो खतरनाक घटनाक्रम को धेरै समस्याहरु मध्ये एक मात्र थियो कि अन्त मा चेंग्दू, UNWTO महासभा को लागी महासचिव को रूप मा जर्जिया उम्मेदवार को पुष्टि भयो।
अफ्रिका को शुरुवात बाट छोटो छडी थियो, २०१ 2017 मा शुरू हुँदा eTurboNews लेखे: म्याड्रिड मा केहि दुर्गन्ध छ.
अन्त्यमा, Mzembi यो नम्बर दुई स्लॉट मा बनायो र Zurab Pololikashvili द्वारा पराजित भएको थियो। यो प्रकाशन Zurab पक्ष र भोट सुरक्षित गर्न को लागी शंकास्पद प्रतिज्ञाहरु संग एक गलत खेल खेल्ने को बारे मा रिपोर्ट गरिएको थियो।
एलेन सेन्टएन्जेले UNWTO महासचिव पदको लागि आफ्नै ट्रेल ब्लाज गरे
एलेन सेन्ट एन्जलाई लाग्यो कि उनी आफ्नै सरकार द्वारा नराम्रो व्यवहार गरीरहेछन् र आफ्नो बिन्दु बनाउन कहिल्यै रोकेनन्। उनले आफ्नो सरकार विरुद्ध मुद्दा हाले र जिते। उनले आफ्नो मुकदमा जिते पछि एक अपील दायर गरियो र अब उनी अझ ठूलो जिते। यो सबै बिहीबार, हिजो भयो।
सेशेल्सको सर्वोच्च अदालतले आज (अगस्त १२, २०२१) पूर्व पर्यटन मन्त्री, एलेन सेन्ट एन्जेको मुद्दाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
एलेन सेन्ट एन्जले हराएको UNWTO चुनाव को लागी M मिलियन रुपैयाँ पाउनेछन्?
सेन्ट एन्जे, जसले आफूलाई पहिलो अफ्रिकी UNWTO महासचिव बनाउने प्रयासमा यस प्रक्रियामा ठूलो व्यक्तिगत आर्थिक नोक्सान भएको पदको लागी अथक अभियान चलाए।
उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय सेशेल्स सरकारले अफ्रिकी संघले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि गम्भीर दबाब दिएपछि लिएको थियो।
सेशेल्स राष्ट्रपति, तेसैले, सेन्ट एन्ज को नामांकन रद्द गरीयो जब उनी पहिले नै म्याड्रिड मा UNWTO कार्यकारी परिषद को बैठक मा भाग लिई रहनु भएको थियो, चुनाव भन्दा २ दिन पहिले।
सेन्ट एन्ज घर फर्के पछि उनी अदालत गए र सर्वोच्च अदालत द्वारा न्यायाधीश मेल्चियर विडोटको अध्यक्षतामा प्रमाणित भयो, जब उनी १164,396.14४,३ 12,366 .XNUMX.१४ सेन्ट (लगभग US $ १२,३XNUMX) को क्षतिपूर्ति दिए।
यो पैसा टाढा टाढाको खर्च कभर गर्दैन St.Ange यस चुनाव को लागी प्रचार मा लगानी। उनले आफ्ना वकिलहरुलाई क्षतिपूर्तिको मात्र विरुद्ध अपील गर्न निर्देशन दिए। उनले पीडा, अपमान, र मनोवैज्ञानिक क्षति पनि थपे कि घटना उनको कारण थियो।
धेरै बर्ष पछि, मामला अन्ततः अपील को अदालत, सेशेल्स मा उच्चतम अदालत समक्ष समाप्त भएको छ। जबकि महान्यायाधिवक्ता अपील मा, मामिला मा यसको सम्पूर्ण रूप मा खारेज गर्न को लागी अपील मा, सेन्ट एन्ज क्वांटम विरुद्ध अपील गरेको थियो।
उनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे कि सर्वोच्च अदालत स्तर मा सम्मानित रकम उनको दाखिला शुल्क कभर गर्न को लागी मात्र पर्याप्त थियो, तर उनको अभियान को दौरान उनले गरेको भारी खर्च को लागी क्षतिपूर्ति गर्न थोरै गरे।
अपीलमा महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई कानुनको हिसाबले एक नागरिक भन्दा फरक मापदण्डमा राख्नुपर्ने माग गर्दै असफलतापूर्वक प्रयास गरे।
अन्ततः, यदि उनीहरुको तर्क सफल हुने थियो, यो एक राज्य को विरुद्ध एक नागरिक कारबाही ल्याउन को लागी एक नागरिक को लागी कठिन बनाउन को लागी असर हुनेछ। हाम्रो क्षेत्राधिकार मा आफ्नो प्रकार को पहिलो मध्ये एक भएकोले, सेन्ट एन्जेस को मामला आज निर्णय पछि विपरीत प्रभाव पारेको छ: सरकार को कार्यकारी शाखा द्वारा लिईएका निर्णयहरु लाई चुनौती दिन नागरिकहरु को लागी दायरा फराकिलो।
अदालतले हिजो सेन्ट एन्जे को पुरस्कार लगभग million० लाख रुपैयाँ सम्म बढायो, प्रभावी ढंगले आफ्नो अभियान को अवधि मा आफ्नो जेब बाहिर को खर्च को धेरै प्रतिपूर्ति।
यो रकम नैतिक क्षति मा १० लाख रुपैयाँ, उच्चतम रकम मध्ये एक आज सम्म गैर मौद्रिक क्षति को लागी हाम्रो क्षेत्राधिकार मा सम्मानित गरीएको छ।
यो निस्सन्देह दावीकर्ताहरु को लागी कारबाही को समान कारणहरु मा अगाडि बढ्न को लागी एक आशाजनक बेंचमार्क हुनेछ।
श्री सेन्ट एन्जेलाई देखिएको थियो, बुझ्न को लागी, राम्रो वातावरण मा हिजो अदालत छोडेर चार बर्ष पछि एक प्रतिकूल सन्दर्भ मा यस मामला संग लड्न, श्री सेरेलोईस वकीलहरु को उनको हर्षित टीम संग, श्री कीरन शाह, श्रीमती मिशेल सेन्ट एन्जे-इब्राहिम, र श्री फ्रैंक एलिजाबेथ।
राज्य श्री स्टेफन नाइट्स द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। जबकि श्री St.Ange एम्मेबली अन्तरक्रिया, सामान्य रूपमा, जम्मा प्रेस संग, त्यहाँ महान्यायाधिवक्ता द्वारा कुनै टिप्पणी थिएन।